Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Deepin 15.4 | Site na Linux
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Deepin 15.4
Ihe si na nnwale pụta Linux miri emi 15.4 O meela ihe na-eju afọ, distro nwere ọdịdị dị mma nke ọma, na arụmọrụ a na-anabata nke ọma yana yana ọtụtụ ngwa arụ ọrụ nke ndabara. Ugbu a, n'agbanyeghị eziokwu na distro dị njikere iji onye ọrụ ọ bụla mee ihe, anyị nwere ike ịme ụfọdụ njikarịcha mgbe wụnye Deepin 15.4 anyị ga-ahụ ya ọzọ.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Deepin 15.4?
2 Fọdụ echiche iji banye na akaụntụ tupu ịmalite ntuziaka
3 Nzọụkwụ ịrụ mgbe wụnye Deepin 15.4
3.1 Melite ihe ndị miri emi nke ndị na-anabata ndị nabatara nke ọma maka ọnọdụ ala gị.
3.1.1 Melite usoro na ebe nchekwa:
3.1.2 Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala:
3.1.3 Wụnye Synaptic
3.1.4 Gbanwee asụsụ ka wps
3.1.5 Wụnye windo fonts:
3.1.6 Nweta ọtụtụ ihe na ụlọ ahịa miri emi
Kedu ihe ọhụrụ na Deepin 15.4?
Mụ onwe m na-atụle Deepin otu n'ime ndị kasị mma Chinese distro m hụrụ na a ogologo oge, dị ka o nwere ihe kasị mma visual ọdịdị nke taa na ọ maara otú mix na ezi arụmọrụ na emelitere software. N'otu aka ahụ, distro na-abịa n'ụzọ nwere njikwa njikwa dị elu nke ga-enyere anyị aka ịhazi ma hazie distro anyị na mmasị anyị.
Ndi oru omimi miri emi lebara anya nke oma na ntaneti ohuru a, site na ntinye ya nke nwere nyocha nke oma, nyocha QR na ozi banyere distro. N'otu aka ahụ, ha agbakwunyela kernel 4.9.8 nke Linux na distro a ka ị nwekwuo nkwado ngwaike.
Ihe omimi 15.4 miri emi di nma, nwere akara ngosi ngosiputa ngwa ngwa, ogwe aka ngharia, menu nhazi nke ndi ozo.
Ekwadoro m ka ị hụ ụfọdụ n'ime nyocha miri emi na-eso ebe njirimara ya na ịma mma nke distro a zuru ezu.
Fọdụ echiche iji banye na akaụntụ tupu ịmalite ntuziaka
Dee 15.4 Ọ bụ disro dabere na debian na desktọọpụ omenala, yabụ ọtụtụ ngwa, ntuziaka na ntuziaka ezubere ma mepụtara maka ọrụ distro a miri emi.
Dabere na ngwaike gị, ụfọdụ ọrụ miri emi nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma, n'ọnọdụ ahụ biko kọọ ya.
Nkwado ndị anyị na-egosi n'okpuru ga-ebu n'okpuru ọrụ nke gị, ha sitere na ahụmịhe anyị na ọgụgụ ndị ọkachamara dị iche iche n'ọhịa.
Nzọụkwụ ịrụ mgbe wụnye Deepin 15.4
Melite ihe ndị miri emi nke ndị na-anabata ndị nabatara nke ọma maka ọnọdụ ala gị.
Nke a bụ nzọụkwụ m weere dị mkpa mgbe m wụnyechara ebe ọ bụ na nchekwa ndị na-arụ ọrụ na ndabara dị oke nwayọ maka ọtụtụ mba ndị na-abụghị Eshia Asia, ịnwere ike ịgbalị ịgbanwe n'otu n'ime ebe nchekwa dị na ndepụta ahụ Deepin na-enye anyị nhọrọ melite (ana m akwado onye si Brazil), mana elav kesara ndepụta nke mirros ndị ọzọ ị nwere ike iji yana m kesara n'okpuru
Iji tinye ebe nchekwa ndị a, anyị ga-edezi sources.list iji mee nke ahụ, gbuo iwu na-esonụ: sudo nano /etc/apt/sources.list
America: United States, Mexico, Dominican Republic, Puerto Rico, wdg.
ụgwọ ftp://mirror.jmu.edu/pub/deepin/ akwụghị ike isi onyinye na-abụghị free deb ftp://ftp.gtlib.gatech.edu/pub/deepin/ agbanwe agbanwe isi na-akwụghị ụgwọ ụgwọ ftp: // mirror .nexcess.net / miri emi / ejighị n'aka isi na-enye n'efu
Spain na Europe:
ụgwọ ftp://deepin.ipacct.com/deepin/ akwụghị ike isi na-enye onyinye na-abụghị n'efu ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ agbanwe agbanwe isi na-enyeghị ụgwọ deb ftp: //mirror.inode .at / miri emi / ejighị n'aka isi na-enye n'efu
ụgwọ ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ akwụghị ụgwọ isi na-akwụghị ụgwọ ụgwọ ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/packages.linuxdeepin.com/deepin/ akwụghị ụgwọ isi na-akwụghị ụgwọ
ụgwọ ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/linuxdeepin/ ejighị n'aka isi na-enye onyinye na-enweghị ụgwọ ụgwọ ftp://mirror2.tuxinator.org/deepin/ enweghị ike isi na-akwụ ụgwọ na-enweghị ụgwọ ụgwọ ftp: //ftp.fau .de / miri emi / ejighị n'aka isi na-enye n'efu
Melite usoro na ebe nchekwa:
Ka anyi mechie iwu na-esite na njedebe anyị:
I nwekwara ike ime ya site na nhazi nhazi, na ngbanwe usoro usoro. Nwere ike irite uru ma kwado ọchụchọ maka mmelite akpaka.
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala:
Anyị na-achọkarị ndị ọkwọ ụgbọ ala ka kọmputa anyị wee rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịwụnye ya dị ka ndị a, maka nke a, anyị na-emepe ngwa ngwa ọkwọ ụgbọ ala nke etinyere na ndabara, tinye paswọọdụ anyị wee họrọ ndị ọkwọ ụgbọala dịnụ maka kọmputa anyị.
Ọ bụ ezie na ahịa Deepin dị mfe iji ma nwee ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa, ana m ewere na synaptic bụ nchekwa nchekwa zuru oke ka m wee kwado ntinye ya, maka nke a, ọ bụ ezughị na anyị na-ebudata ụdị nke 32 ibe n'ibe o 64 ibe n'ibe kwekọrọ na ụkpụrụ ụlọ gị ma wụnye iji gdebi, ma ọ bụ njikwa ngwugwu ọ bụla ọzọ.
Gbanwee asụsụ ka wps
Ngwunye ụlọ ọrụ nke miri emi na-eweta ndabara bụ wps, anyị ga-agbanwe asụsụ gaa na Spanish ka o wee nabata ihe odide niile nke asụsụ anyị na onye ndozi na-arụ ọrụ nke ọma.
Iji mee nke a, mepee wps ma gaa na aka ekpe aka ekpe ebe ị ga-enwe nhọrọ nke na-ekwu mgbanwe asụsụ (ịgbanwee asụsụ), anyị ga-achọ asụsụ (ma ọ bụ olumba) anyị chọrọ ma anyị nakweere ya, a ga-ebudata ngwugwu kwekọrọ na asụsụ ahụ ga-agbanwe.
Wụnye windo fonts:
Anyị nwere ike iwunye windo windo na iwu na-esonụ
sudo apt-nwụnye ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-liberation ttf-freefont
Nweta ọtụtụ ihe na ụlọ ahịa miri emi
Ihe nke miri emi bụ ụlọ ahịa mara mma, mara mma, ahaziri ahazi, ngwa ngwa, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa yana ntinye dị mfe, ndụmọdụ m n'onwe m bụ ka anyị nweta ọtụtụ ụlọ ahịa a, na-achọ ngwa ndị anyị na-amaghị, na-anwale ma ọ bụ na-etinye. ngwa kachasị eji.
Site na obere mgbanwe ndị a, anyị ga-enwe omimi miri emi karị, na ọ bụrụ na anyị ebido gbanwee ụfọdụ ihe ndị ọzọ, ihe ga-arụpụta ihe ga-apụta n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Deepin 15.4
Mara maria del dijo
Magburu onwe ya, dị ezigbo mma !!
Zaghachi na Marcial del Valle
Ndewo ekele. Enwere m nsogbu m na-enwebeghị ike idozi na Deepin 15.4, nke bụ vidiyo adọwara adọwa, enwere m eserese intel agbakwunyere, enwere olile anya na mmadụ nwere ike inyere m aka, daalụ.
Enwere m otu nsogbu ahụ enweghị m ike idozi ya
Ezigbo nkuzi ga-aba uru maka ndị bịara ọhụụ na distro, mana m ga-edo ihe maka gị na nke ahụ bụ na Synaptic so na ụlọ ahịa miri emi, ị nwere ike chọọ ya ma wụnye ya site na ya. Enwekwara ọtụtụ ngwa ndị synaptik na-ahụ naanị.
Imelite ihe nchekwa ego ekwesighi isi ike dika ha na-eme site na njedebe, nke a bụ azịza kachasị mfe
n'ikpeazụ m hapụrụ vidiyo na-akọwa n'ụzọ kachasị mma, ihe ị ga-eme mgbe ị wụnyechara miri emi?
na nyocha nke gọọmentị nke miri emi 15.4
Daalụ maka imekọ ihe na nkesa Chinese a, m sitere na OpenSUSE 42.2 (KDE na Cinnamon) nke mere ka m daa n'ihi na ọ na-adị nwayọ nwayọ na ọ naghị esi ike. N'oge ahụ, arụnyere Deepin dị mma mana iji gbochie ya ịpụ mgbe ị na-eji "sudo apt-get update && apt-get upgrade":
E: Enweghị ike imeghe faịlụ mkpọchi "/ var / lib / dpkg / mkpọchi" - mepee (13: ekweghị ikikere)
E: Enweghị ike igbachi ndekọ nchịkwa (/ var / lib / dpkg /), ị dị ka superuser?
M na-eji: «sudo su» M tinye paswọọdụ m na pịnye: «apt-get update && apt-get upgrade» na mmelite ahụ malitere ozugbo, n'ezie m buru ụzọ gaa Control Center (n'akụkụ aka nri ala) ma site n'ebe ahụ na «Mmelite / Mmelite ntọala »M gbanwere enyo na nke kachasị ọsọ maka mpaghara m.
Mgbe ịtinyechara ebe ị ga - etinye: sudo fc-cache
Adịghị m ọkachamara, achọrọ m ịma banyere GNU / Linux ma na-amasịkarị KDE, amụtala m ihe niile site na edemede na nkuzi dị ka nke gị.
Ikwesiri ịkọwa sudo ugboro abụọ na ngwa-enweta adịghị mkpa na nke ọma. "Sudo apt update && sudo apt nweta nkwalite"
Zaghachi ka uzanto
Ndewo, ezigbo nkuzi, enwere m nsogbu, m wunye miri emi mana ọ naghị ekwe ka mchekwa ma ọ bụ hichapụ ntfs disks ma ọ bụ partitions, ọ na-etinye mkpọchi na nke ọ bụla n'ime ndị a ma amaghị m otu esi edozi nsogbu a, echere m azịza ma site ugbu a gawa, daalụ . Cheers
Darwins na-eche dijo
Ezi ehihie, gbalịa wepụ nhọrọ mmalite ngwa ngwa na nhọrọ ike windo, malitegharịa na miri emi na voila
Zaghachi Darwins Torres
Carlos Luciano Figueroa dijo
Ndewo kedu ka ị mere, enwere m cx notebook nwere i7 16gb nke ebule na intel hd graphics card tinyere nke ọzọ sitere na nvidia 940mx. M hụrụ n'anya Deepin 15.4 mana enweghị m ike idozi nsogbu nke mmelite site na GUI. Oge ọ bụla ọ jụrụ ka ịmalitegharịa iji melite, m na-eme ya mana ọ na-enye oge na 0% ma na-enye mperi, n'agbanyeghị ịnwale ọ na-aga n'ihu na otu. Emelitere m site na ọnụ. Msg na egosiputa na njedebe: 0 emelitere, a ga-etinye ihe ọhụrụ 0, 0 wepu ya na 52 anaghị emelite. O doro anya na otu njehie a anaghị ekwe ka m budata ma wụnye ngwa ndị ọzọ na ụlọ ahịa ahụ, ebe ọ bụ na ha na-enyekwa m nsogbu. Ihe nchekwa ego sitere na obodo m ma ha na-arụ ọrụ na ọsọ ọsọ 20mb m. Olee otú m ga-esi dozie nsogbu ahụ? Anọ m na-achọ ma na-achọ ozi gbasara ya mana m dị ọhụrụ na Linux ma ihe niile na-efu okpukpu abụọ. Nke mbu, daalụ nke ukwuu maka onyinye gị na oge ị nọrọ. Cheers!
Zaghachi Carlos Luciano Figueroa
Soro usoro iji gbanwee ebe nchekwa gọọmentị Beijing dị nso na obodo gị
E wezụga ime ihe Darwin Torres na-ekwu, ọ dị mfe iji wụnye ngwa ngwa (Na-achọ ịwụnye aria2). Ọ bụrụ n’ịchọta ya oke mgbagwoju anya ịwụnye ihe niile ahụ site na ọnụ, ị nwere ike ibudata .deb nke prozilla na apt-proz (Ọ bụ ezie na ọ dị obere nwayọ). Sọftụwia a na - enyere gị aka mee ka ọnụọgụ njikọ ga - eme ngwa, na - eme nbudata ngwa ngwa.
PS: Ọ bụrụ na ị kpebie ịwụnye ngwa ngwa, ị ga-eji akwụkwọ ntuziaka tinye ya na Debian, ọ bụghị Ubuntu.
Blọọgụ gị dị mma mana enwere m olile anya na ị ga-agwa m ka esi etinyere ngwa ntinye akwụkwọ na miri emi n'ihi na sudo add-apt-repository ppa: ha anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ha adịghị emelite.
Na nhazi ahụ, na ngalaba melite, ndepụta nke enyo pụtara site na nke ị nwere ike ịhọrọ nke dị nso na obodo gị
Deepin dakọtara na ppa dịka ọ dabeere na Debian ma ọ bụghị Ubuntu. Ma ị nwere ike iwunye nchịkọta ndị ahụ na "Aptik", ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa Deepin, na nkọwa ọ na-ekwu na ọ na-enye gị ohere ịwụnye ngwungwu ngwanrọ dịka ppa.
Ọfọn, m gbalịrị ma ọ dọpụtaghị 🙁
Ndewo, nkuzi magburu onwe ya. Ajuju n’ime omimi m 15.4 Enweghị m iwu iwu DEB. Olee otu esi etinye ya ???
Zaghachi Carlos Flores
iji jikwaa .DEB faịlụ ị ga-etinyerịrị gdebi
Ndo, enwere m nsogbu, m wunye 15.4mm miri emi, m na-emelite ihe niile, mana mgbe ọ gbanyụrụ ma gbanyụọ ya, ụgbọ mmiri ahụ na onye na-ebupụta ya ewepụla ma enweghị m ike idozi ya, achọrọ m enyemaka
Otu esi emepụta GIF site na onyonyo Linux site na njikwa
Etu esi kewaa ma sonyere faịlụ na Linux